दाङपछि काठमाण्डौंमा फेसवुक लाइभ गरेर युवतीले गरिन दे’हत्याग (भिडियो ) – सडक मिडिया
Sadak Media on Facebook
Sadak Media on Twitter
Tamachuli Khabar on Youtube
गृह समाचार- राजनीति - अर्थ / वाणिज्य - छापाबाट विश्व समाज/अपराध खेलकुद कला / साहित्य- मनोरञ्जन भिडियो- फोटोकथा विविध- विचार - प्रवास - विचित्र सुदूरपश्चिम- अछाम - डाेटी - बाजुरा - बझाङ - डडेल्धुरा - बैतडी - दार्चुला - कैलाली - कंचनपुर ENGLISH ⓟ
दाङपछि काठमाण्डौंमा फेसवुक लाइभ गरेर युवतीले गरिन दे’हत्याग (भिडियो )
सडक मिडिया July 5, 2020 0
दागंमा एक युवतीले फेसवुक लाइभमै दे’हत्याग गरेको घ’टना सेलाउन नपाउँदै फेरी काठमाडौंमा त्यस्तै प्रकृतिको घ’टना भएको छ । काठमाडौं कारकेश्वर वासुकी नागटोल ९ मा फेरी त्यस्तै घ’टना भएको छ ।
उदयपुर घर भएकी सर्मिला मगरले फेसवुक लाइभ गर्दै दे’हत्याग गरेको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । उनी राति करिब २ वजे फेसवुक लाइभ गर्दै देहत्याग गरेको हुन सक्ने छिमेकीले बताएका छन् ।
राती ९ वजेसम्म पनि सामान्य अवस्थामा देखिएकी उनी राती कोठामा एक्लै थिइन् । छिमेकी महिलाले भनिन्, हिँजो मैले दिनभर उनलाई मोवाइलमा विजी भएको देखेको थिए ।
कोठा भाडामा बस्नेहरु बताए अनुसार राती करिब १२ वजेतिर उनी पानी परेपछि कपडा उठाउन छतमा समेत पुगेकी थिइन् । तर विहान अवेर समेत उनको कोठा नखुलेपछि एउटै घरमा भाडामा बस्नेहरुले हेर्दा उनी मृ’त फेला परेकी थिइन् ।
छिमेकी र संगै कोठामा बस्नेहरुसंग उनले यस अघि मलाई त बाँच्न मन छैन भन्दै आएकी थिइन् । संगै बस्ने एक महिला भन्छिन्, अस्ति मात्र यो लुगा सिलाएकी थिइन् । असार १५ गते दहि चिउरा खाने दिनमा त्यो लुगा पनि लगाएकी थिइन् । अहिले यहि लुगा लगाएकै अवस्थामा मृ’त देखिएकी छन् ।
ति युवतीले स्टुल माथि चढेर सिलिगंमा स-लको पा सो लगाएर झु ण्डि एको अवस्थामा युवतीलाई स्थानियले देखेका थिए । एक जना स्थानिय तरकारी किन्न पसलमा आएका थिए । उनले चलाएको पसलमा तरकारी किन्न आएका युवाले सटर ढकढक्याएर बोलाउँदा युवती नआएपछि ति युवकले झ्यालको पर्दा खोलेर हेर्दा युवतीलाई मृ’त देखेका थिए ।
त्यसपछि उनले अन्य स्थानियलाई खबर गरेका थिए । त्यस पछि प्रहरी आएर श’व पो’ष्टमार्टमका लागि लिएर गएको थियो । ति युवतीले केही दिन यता अस्वभाविक ब्यवहार देखाउने गरेकी थिइन् । दिनभरी पनि झ्यालको नजिक आएर रुदै बस्ने गरेकी थिइन् । छिमेकीले उनले रुँदै मोवाइलमा भिडियो बनाउँदै गरेको पनि देखेका थिए । एक जना पुरुषले भने यि युवतीलाई यहाँ आएर रुँदै बस्दै गरेको देखेको थिए ।
उनले झ्याल देखाउँदै भने, झुलुक्क आउने जाने गर्थिन । अर्का ब्यक्तिले पनि उनी केही दिन यता आफुले संचालन गरेको पसलमा पनि बस्थिनन् । आफुहरु तरकारी किन्न आउँदा पनि कोठामा बोलाउन जानुपर्ने बताएका छन् ।
भिडियो तल हेर्नुहोस
Post Views: 4,970
Previous Post: ६ मिनेटको छायांकनमा ६ करोडको खर्च भएकाे अल्लु अर्जुनको फिल्म ( भिडियो )
Next Post: भुवनलाई अर्को आरोप, प्रमाणसहित अर्कि चेलिले खोलिन् पोल (भिडियो हेर्नुस्)
लेबनानमा एमोनियम नाइट्रेड बिस्फोट, ७० को मृ’त्यु, हजाराैँ घाइते
बाढीले बगाएको गैँडा तीन वर्षपछि भारतबाट उद्धार
कोरोनाबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ५९ पुग्याे
काेराेनाकाे कारण थप एक जनाकाे मृ’त्यु
उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा भेटिए ४० संक्रमित
सुन प्रतितोला एक लाख पुग्न लाग्याे
कपनमा भेटिएकी शिशुको सिसी टिभिमा भेटियो प्रमाण, पैसाकै लागि रचियो नाटक
कार्टुनमा राखिएको शिशुको आमाले रुँदै वास्तविकता बताइन – भिडियो हेर्नुहोस्
सुशान्तकी प्रेमिका रिया पुलिससँग किन भागिरहेकी छन्?
काठमाडौंमा थप ६२ जनामा कोरोना
अभिनेता आशुतोष भाख्रेले गरे आत्मह-त्या 680 views
पिठ्युँमा बच्चा बोकेर काम गर्ने अर्जुनकी श्रीमती पहिलोपटक मिडियामा – भिडियो 551 views
पुनः दुई हप्ता लकडाउन ? विज्ञहरूले दिए सरकारलाई सुझाव 548 views
मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रदेशसभा सदस्य गम्भीर घाइते 536 views
थप ४ सय १८ जनामा कोरोना देखियो 337 views
नाती र छोराको दुख देखेर थामिएन अर्जुनका आमाबुवाको आशु ( भिडियो सहित ) 220 views
कपनमा भेटिएकी शिशुको सिसी टिभिमा भेटियो प्रमाण, पैसाकै लागि रचियो नाटक 215 views
पवन मधुश्रीको हृदयस्पर्शी गीत ‘आमा’ – भिडियो 207 views
कार्टुनमा राखिएको शिशुको आमाले रुँदै वास्तविकता बताइन – भिडियो हेर्नुहोस् 130 views
वास्तविकता बताउदै अर्जुनकी श्रीमती रुँदै आइन मिडियामा – भिडियो 94 views
सडक मिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित
कमल प्रसाद भण्डारी
सूचना विभाग दर्ता नं. ९५२/०७५-७६
सम्पर्क नं.: ९८४८५५०८८४
इमेल : sadakmedianepal@gmail.com
सम्पर्क नं.: ९८६८७७५३१०
Tweets by sadakmedia
Copyright © 2020 सडक मिडिया. Site by Prabin Bhandari.